Soo-saareyaasha Nidaamka Qalabaynta Magnetic-ka & Alaab-qeybiyeyaasha - Shiinaha Warshad Nidaamka Qalabaynta Magnetic
Nidaamka Sifeynta Magnetic
Nidaamka Xiritaanka Magnetic
Suxuunta Magnetic Fixing
Saadaasha Qalabka La Taaban karo
Nidaamka Haysta Magnetic
Magnet Dahaarka Leedaha
Qaadista Magnetic Lifter Portable ee waraaqaha birta
Qaadista Gacan-siinta Magnetic-ga Joogtada ah ee loogu talagalay Transshi ...
Mawjadaha Bushing-ka ee loo yaqaan 'Precast Concrete Embedde' ...
Geeska Magnet ee isku xidhka Sys shuttering Sys ...
Ku haynta Magnet-ka Fidinta Barroosinka Meelaynta & ...
1.3T, 2.5T, 5T, 10T biririfta birta Magnet Hore ...
0.5m Length Magnet Nidaamka Xogta Lagu Xirayo
2100KG, 2500KG jiidaya Force Precast Magnet la taaban karo ...
1350KG, 1500KG Nooca Nidaamka Magnetic Formwork
900KG, 1Ton Box Magnetka ee Jadwalka Jadwalka Miisaanka Mo ...
Magnet Magacyo Dabino Liquid leh Nooca Isku Xirnaanta Flangle
Ku haynta Magnooyinka jaranjarada Pilot
Qalabka Soojiidashada Magnetic
Qalabka Qaadista Wareegtada Magnetic-ga
Wareegtada Magnetic catcher ee soo celinta Ferrous
Holder Magnetic Awood leh
ABS Rubber-ku-saleysan Magnet-yada loogu talagalay meeleynta Meeleynta PVC tuuboyinka qaab-dhismeedka birta
ABS Rubber based Round Magnet wuxuu hagaajin karaa oo ku dhejin karaa dhuumaha PVC gundhigsan si sax ah oo si adag ugu dhejisan qaabka birta. Marka loo barbar dhigo birta saxanka hagaajinta magnetic, qolofka caagga ah ee ABS waa mid dabacsan oo ku habboon dhuumaha dhexroorrada gudaha ugu wanaagsan. Dhib malahan dhaqdhaqaaq iyo sahal in la qaado.
Dunta busnet Magnet for Precast saldhig qaadista la taaban karo Precast
Mawjadaha Bushing Magnet waxay ka kooban yihiin xoog dhejis magnetic xoog leh oo loogu talagalay saldhigyo wax lagu dhejiyo oo ku jira wax soo saarka walxaha la taaban karo, oo ka dhacaya alxanka hore iyo habka isku xirida. Xoogga wuxuu u dhexeeyaa 50kg ilaa 200kgs oo leh dhexroorro kala duwan oo xulasho ah.
Geeska Magnet ee Isku Xidhka Nidaamyada Xiridda Magnetka ama Caaryada Birta ah
Magnet-ka 'Corner Magnet' ayaa si fiican loogu isticmaalaa laba qaab oo toosan oo "L" ah oo qaabeysan oo bir ah ama laba astaamood oo birlab ah oo magnet ah oo leexashada. Cunnooyinka dheeraadka ah ayaa ikhtiyaari ah si loo xoojiyo isku xidhka u dhexeeya geesta gees iyo caaryada birta ah.
Bar birta birta ah ee sii deynta Magnet Button Riix / Jiid
Biraha Biraha birta waa qalab isku dheelitiran oo lagu sii daayo birlabyada riixa / jiidaya markii loo baahdo in la dhaqaajiyo. Waxaa soo saaray tuubbo heer sare ah iyo saxan bir ah oo lagu shaabadeeyey habka alxanka iyo alxanka.
Ku haynta Magnet-ka Fidinta Barroosinka Meelaynta & hagaajinta
Maaddooyinka xajista waxay u adeegaan dejinta iyo hagaajinta barroosinka fidinta oo leh qaab bir ah. Laba ulood oo milled ah ayaa lagu duudduubay jirka saxanka birlabta, si ay uga dhigto qaybta hoose ee caaggu mid sahlan markii la rakibayo.
Haye saxan magnetic leh dunta beddeli-Pin for hagaajinta Socket Magnet D65x10mm
Kuwa haysta saxanka birlabta ayaa loo soo saaray si loo geliyo saldhigyo dun ah, gacmo-gacmeedyo loox ka sameysan bir qaab bir ah. Magnetadu waxay leeyihiin astaamo adhesion stromg aad u sarreeya taas oo keeneysa shaqeyn, xal waara oo waara.
1.3T, 2.5T, 5T, 10T biririfta birta magnet hore ee barroosinka Barxadda
Birta birta hore magnet waxaa loogu talagalay loogu talagalay hagaajinta barroosinka kor u qaadista on caaryada dhinaca, halkii caag dhaqameed fasax hore screwing. Qaabka semi-sphere-ka iyo godka srew ee dhexe ayaa sahlaya in lagalaabo boodhka shubka marka la jarayo.
Steel Magnetic Triangle Chamfer L10x10, 15 × 15, 20 × 20, 25x25mm
Steel Magnetic Triangle Chamfer wuxuu si fiican u bixiyaa meeleyn deg deg ah oo sax ah oo loogu talagalay abuurista geesaha geesaha leh ee geesaha iyo wajiyada darbiyada derbiga la taaban karo ee dhismaha qaab dhismeedka birta.
M16, M20 Taarikada Qalabka Dhexdhexaadinta ee la Dhex Galiyay Qalabka Dhexdhexaadinta iyo Nidaamka Qaadista
Saxanka Dhex-dhexaadinta Magnetic-ka waxaa loogu talagalay hagaajinta duubka dunta leh ee wax soo saarka shubka hore. Xooggu wuxuu noqon karaa 50kg ilaa 200kgs, oo ku habboon codsiyo gaar ah oo ku saabsan xoogga haysta. Dhexroor xarig wuxuu noqon karaa M8, M10, M12, M14, M18, M20 iwm
350KG, 900KG Loaf Magnet oo loogu talagalay biraha birta ah ee Precast ama Shandada Plywood
Loaf Magnet waa nooc ka mid ah magnetka wax lagu xiro oo leh qaab rooti ah. Waxaa loo isticmaalaa in lagu waafajiyo caaryada tareenka birta ah ama shubka plywood. Adabtarada guud ee adduunka kudarsan wuxuu taageeri karaa birlabta rooti si uu si adag isugu xiro caaryada dhinaca. Way fududahay in birlabta looga saaro booska qalab sii deyn gaar ah.
Nooca 1T ee ahama birta birta ah ee birta leh oo 2 Magac leh
Nooca 1T ee birta birta ah ee birta birta ah waa cabir caadi ah soosaarida walxaha pc sandwich fudud. Waxay ku habboon tahay dhererka caaryada dhinac dhumucdiisuna 60-120mm. Banaanka kore ee 201 birta birta ah iyo badhanka ayaa iska caabin kara wasakhda ka timaadda shubka.
0.9m Dherer Magnetic Side Rail with 2pcs Integrated 1800KG Magnetic System
Nidaamkan tareenka dhererkiisu dhan yahay 0.9m, wuxuu ka kooban yahay qaab dhismeed bir ah oo leh 2pcs oo isku dhafan 1800KG farsamooyin xiisad magnetic ah, oo loo isticmaali karo dhismaha qaab dhismeedka kala duwan. Daloolka xarunta loogu talagalay ayaa si gaar ah loogu talagalay wax soo saarka aaladda robot ee siday u kala horreeyaan laba darbi.
Sidee loo soo saaraa Magnet Sintered Neodymium?
Sintered NdFeB magnet waa magnet daawaha laga sameeyay oo laga sameeyayNd, Fe, B iyo walxo kale oo bir ah.Waxay ku jirtaa birlabta ugu xoogan, xoog qasab fiican. Waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa matoorrada yaryar, ...
Right Xuquuqda -Chuzhou Meiko Magnetics Co., Ltd. db2020. Dhammaan Xuquuqda Ayaa Leedahay